Qaramada Midoobay oo ka digtey macaluul ka dillaacda Soomaaliya | Sagal Radio Services
Qaramada Midoobay oo ka digtey macaluul ka dillaacda Soomaaliya
Qaramada Midoobay ayaa ka digtey cunto yari iyo macaluul ay suurogal tahay in ay Soomaaliya ka dillaacdo dhowrka bilood ee soo aaddan.
U-qaybsanaha Qaramada Midoobay ee Gargaarka Bini'aadmnimada Soomaaliya Philippe Lazzarini, ayaa shir-jaraa'id oo shalay uu magaalada Geneva ku qabtay arrintan ka sheegay.
Lazzarini ayaa digniinta Qaramada Midoobay wuxuu u sababeeyey: roobabkii oo dib u dhacay, qiimaha cuntada oo kordhay, xasillooni darro ka jirta deegaanada qaar iyo weliba kaalmadii ay Soomaaliya dibadda ka heli jirtay oo aad hoos ugu dhacday.
Hay'adaha Qaramada Midoobey iyo kuwa kale ee caalamiga ah ee ay dhanka bini aadamnimada ka wada shaqeeyaan, waxay dalbadeen 933milyan oo doolar si ay xaaladda cunto yarida wax uga qabtaan, lacagtaas oo sida Philippe Lazzarini uu tilmaamay ilaa hadda 15% oo kamid ah lasoo ururiyey.
Bishii November ee sannadkii hore , waxaa warbixin Qaramada Midoobay kasoo baxday lagu sheegay in xaalad cunto yari ahi ay soo wajihi doonto 7.1 milyan oo qof oo Soomaali ah, dadkaas oo badankoodu ku nool gobollada dhexe iyo waqooyi bari Soomaaliya.
Abaaro daran oo sanadkii 2011 ku dhuftay qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya ayaa sababay macaluul galafaatay nolosha boqollaal qof oo carruur iyo dad da'ah u badnaa.